Left Hand Path ကို
အခမဲ့ Tarot သင်တန်း - 1 Arcana: အဆိုပါ Wizard ကို
Alejandro Aristeguieta သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 4, 2019
ထိုရက်သတ္တပတ်၏ပေးစာ - ဇန်နဝါရီ 2019
Alejandro Aristeguieta ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 2, 2019
တစ်ပတ် 27 / 30 ဒီဇင်ဘာလဧကရာဇ်၏ပေးစာ
Alejandro Aristeguieta ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 27, 2018
အခမဲ့ Tarot သင်တန်း -0Arcana: မိုက်။
Alejandro Aristeguieta ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 26, 2018
Alejandra Aristeguieta စနေနေ့,3နိုဝင်ဘာလ 2018
Alejandra Aristeguieta ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 10, 2018
Morgana သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 3, 2018
Morgana ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 29, 2017
Morgana စနေနေ့, 25 မတ်လ 2017
Alejandro Aristeguieta ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 21, 2018
Morgana ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 30, 2018
Good Luck ဆွဲဆောင်
Morgana ဒိုမင်ဂို, သြဂုတ်လ 5, 2018
Morgana သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 1, 2017
ခေတ်သစ် Pagana တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 24, 2018
အဆိုပါ Ouija ဘုတ်အဖွဲ့: မကြာခဏမေးခွန်းများကိုမေးသော်
ခေတ်သစ် Pagana သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 30, 2018
ကမ္ဘာကြီးကို Wicca မှတစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်
Alejandro Aristeguieta ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 15, 2018
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အသက်တာ၌ဟန်ချက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်သောတကယ်လား? (+ RITES)
ခေတ်သစ် Pagana အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 9, 2018
Alejandro Aristeguieta အင်္ဂါနေ့ဒီဇင်ဘာလ 11, 2018
Alejandro Aristeguieta တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 10, 2018
Alejandro Aristeguieta တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 3, 2018
Alejandro Aristeguieta တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 19, 2018
Alejandra Aristeguieta အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 9, 2018
ထုံး၏ The Magic
Alejandra Aristeguieta သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 5, 2018
နှင်းဆီ Quartz: ကို Magic နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
နီလာခရမ်းရောင်: ကို Magic နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
Alejandro Aristeguieta ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 3, 2019
ရေ Marina: ကို Magic နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
Black က tourmaline: ကို Magic နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
Alejandro Aristeguieta ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 6, 2018
Alejandro Aristeguieta ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 5, 2018
Alejandro Aristeguieta သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 30, 2018
Alejandro Aristeguieta ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 29, 2018
Morgana တနင်္လာနေ့ 17 စက်တင်ဘာလ 2018
Morgana တနင်္ဂနွေ9စက်တင်ဘာလ 2018
ကား - ထို Black ကကမ္ဘာမြေမှဝင်ပေါက် (အပိုင်း 1)
Alejandro Aristeguieta အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 27, 2018
Qliphoth Initiative (အပိုင်း 3)
Alejandro Aristeguieta သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 23, 2018
Lilith - အားလုံးစုန်း၏မိခင်မှတစ်ဦးမိတ်ဆက်
Alejandro Aristeguieta ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 14, 2018
Hermetic ဒဿနိကဗေဒ - အပိုင်း 2
Alejandro Aristeguieta စနေနေ့, 17 နိုဝင်ဘာလ 2018
Hermetic ဒဿနိကဗေဒ - အပိုင်းတစ်ခုမှာ
Paleria Palo Monte Mayombe သို့မဟုတ် Palo, ကဘာလဲ?
Morgana စနေနေ့, သြဂုတ်လ 11, 2018
Morgana သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 10, 2018
သင့်ရဲ့အခမဲ့ horoscope Check
အိုးကင်းနှင့်တံမြက်စည်းများတွင်အခမဲ့အကောင်းဆုံးကို, နေ့စဉ်အပတ်စဉ်, လစဉ်နှင့်နှစ်စဉ် horoscopes ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာတွင်ယနေ့အဘို့တကယ်သင့်ရဲ့ horoscope ယင်းရာသီခွင်အပေါ်, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့သတင်းထောက်ယင်းရာသီခွင်၏နိမိတ်လက္ခဏာ, သင် horoscopes ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များများ၏ကံကောင်းအရေအတွက်ကနေဆင်းသက်လာပုဂ္ဂိုလ်ရေးကံဇာတာအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များမဟုတ်သာမူတည်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့အနာဂတ်ယနေ့ယခုအပတ်, ဒီလသို့မဟုတ်ဤနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, သင်တို့၏နိမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ, သင့်ကိုတက်နှင့်များစွာသောသိချင်စိတ်ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကို update ဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ horoscope, သောအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ။
palmistry, tarot, ဒါမှမဟုတ်ပဲတချို့အကြံပေးချက်ကိုတဆင့်ခြင်းရှိမရှိငါမဆိုပြဿနာများနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိတာပါ
သင့်ရဲ့ Pagana Moderna နှင့်အတူတိုင်ပင်ဆွေးနွေး
ငါအနာဂတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပါဝါရှိသည်, ပစ္စုပ္ပန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်, သာလွန်သတ္တဝါ get အကြံပေးချက်အသုံးပြုပုံငါသည်သင်တို့၏အသက်တာ၏ကိစ္စရပ်များကိုတက်ရောက်ရန်နှင့်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ YayaNtala နှင့်အတူတိုင်ပင်ဆွေးနွေး
အကြှနျုပျ၏ဘက်စုံအလုပ် Tarot ကတ်များ Rider ချောင်းမြောင်း (ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဖြစ်ပွားနေသော) ကိုဖတ်ရှုပါဝင်ပါသည်။
ဘက်စုံကုထုံး: crystalotherapy, ချိန်ခွင်လျှာ chakric, အိုင်း footbath, reflexology, dowsing နှင့် footbath ။
သင့်ရဲ့ Alejandra Aristeguieta နှင့်အတူတိုင်ပင်ဆွေးနွေး
အားလုံးပစ္စည်းများ Amore ကောင်းကင်တမန်များ White ကမှော် မှော်ထုံး သည်အခြားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မှော်ကျောက်များ Left Hand Path ကို Tarot ဖယောင်းတိုင် Wicca
Quartz Crystal: မှော်နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
Jaspe: ကို Magic နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
Garnet: ကို Magic နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
အစိမ်းရောင် Quartz သို့မဟုတ် aventurine: မှော်နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
Quartz အပြာရောင်: ကို Magic နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
ရေ Marina: မှော်နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
ကျားမျက်လုံး: ကို Magic နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
အဓိကနှင့်အသေးစား arcana -4အဆိုပါ Tarot ဖတ်နေတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ် element တွေကိုအသုံးပြုသည်။
Tarot နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထုံးတမ်း: ကိုယ်ဝန်များအတွက် Empress နှင့်အတူထုံးတမ်း။
အဆိုပါ Templar ၏ Tarot: ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ရှင်းပြချက်ကိုဗီဒီယို
tool ကိုမှော်စတင်အဖြစ် tarot
ဖယောင်းတိုင်ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာ - Gemini
ဖယောင်းတိုင်ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာ - Taurus
ဖယောင်းတိုင်ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာ - Aries
Qliphoth Initiative (အပိုင်း 2)
Qliphoth Initiative (အပိုင်းငါ)
မွန်းအဆင့်နှင့်သူတို့သင်၏အသက်ကို (+ ထုံးတမ်းနတ်ဘုရားမ) ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးပုံကို
ကို Magic: နိဒါန်းနှင့် Conceptual
ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာနှင့်သူတို့၏ဒြပ်စင်: ရေ, လေ, မြေကြီးနှင့်မီး
ပို Blog Entry View
todo Amore ပိုက်ဆံ မှော်ထုံး ကာကွယ်မှု အတော်ကြာ
ထုံးတမ်းညဥ့်ကို San Juan
စင်ကြယ်သောစွမ်းအင်ထုံးတမ်း - ကောငျးကငျတမိုက်ကယ်လ်
✨ဘလော့ Horoscopes, စာလုံးပေါင်း, စာလုံးပေါင်း, အဖြူရောင်ကို Magic, က Black Magic နှင့် Divinity
အမှု၌သင်တို့ရှေ့မှငါ့ကိုဖန်ဆင်းဘူး, ငါ Morgana, တဦးတည်း brujilla လေးဆယ် ... (အဆိုပါစုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တကယ်အသက်အရွယ်ဆိုသညျကားဘယ်တော့မှမ: P) နှင့်ကျနော်အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအကျိုးစီးပွားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်, ငါ့ဘလော့ဂ်သည်အိုးကင်းနှင့်တံမြက်စည်းရန်သင့်အားကြိုဆိုပါတယ် သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသူတို့သငျသညျအခွားသောအရပ်တို့ကိုသင်ပေးလို့ရပါတယ်အဘယျသို့ကျော်လွန်သငျ့စိတျနှငျ့အသိပညာဖွင့်လှစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ဒီမှော်ဆန်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ရှိသည်။
ဒီထောင့်၌သငျထိုကဲ့သို့သောတတ်အတွေ့အကြုံများ, အဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင်မှော်, clairvoyance, ကံဇာတာပြောရာမှာ, တန်ဂါထာ, ထုံးတမ်း, စသည်တို့နှင့်အတူရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာမိမိတို့သိချင်စိတ်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအဖြစ်အကြောင်းအရာများအပေါ်ဆောင်းပါးတွေကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ် ... နှင့်ဤလောကသို့စတင်ရှင်းပြ သင်အလိုရှိပါလျှင်ထုံးတမ်းများနှင့်စာလုံးပေါင်း။ သင်တို့မူကား, သင်ထားတဲ့ကိစ္စကိုအာရုံစိုက်ခေါ်သနည်း, သင်တိကျတဲ့တစ်ခုခုအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါလျှင်ငါသည်သင့်ကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်?, တှနျ့ဆုတျအိုးကင်းနှင့်တံမြက်စည်းအဘို့အ sign up ကိုနှင့်သင့်မှတ်ချက်မချန်မထားကြဘူး။ ဒါကြောင့်စပ်စုသင်ယုံကြည်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားဖို့တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
စာလုံးပေါင်း, ထုံးတမ်း, စာလုံးပေါင်းနှင့်အဖြူရောင်ကို Magic နှင့်အနက်ရောင်အိုးကင်းနှင့် Broome
သူတို့တစ်တွေသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့သို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးဖို့လမ်း, မယနေ့တွေ့ရှိရဖူးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်၏အစအဦးကတည်းကလူသားတို့ကိုအစဉ်အမြဲ, လေးစားခံရဖို့တစ်ခုခုအဖြစ်သဘာဝတရား၏တပ်ဖွဲ့များကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ အတိတ်ကာလ၌, ကောင်းကင်မှပြုတ်ကျနေတဲ့အလင်းတစ်တွေအများကြီးအံ့အားသင့်အချိန်ရဲ့ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ကျနော်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်သူက ... မီးတောက်ထဲမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အိမ်သူအိမ်သားကိုမီးရှို့အမှိုက်ပုံးတဦးတည်း, စသည်တို့ကိုအသေခံရန်အပင်တစ်ပင်ကိုတက်မှုတ်နိုင် ဤအတပ်ဖွဲ့တွေအဲဒီများ၏ခွင့်ပြုချက်အနိုင်ရနှင့်မျက်နှာသာရှိသည်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်များအတွက်အပြုသဘောဆောင်တစ်ခုခုသို့သူတို့ကိုငါဖွင့်ဖို့ထိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ပဉ္စလက်သို့ရောက်ကြ၏။
စဉ်းစားတွေးခေါ်ငါ၏လမ်းစေရန်, မည်သူမဆိုတစ်ဦးရိုးရာဓလေ့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသဟဇာတဖြစ်ရပါမည်ထိုသို့ပြုမှအချိန်ကိုဖော်ပြရန်, ဤအကောင်အထည်ဖော်အတွက် tools များအဖြစ်အသုံးပြုသင့်သည်အဘယ်အရာကိုအရာဝတ္ထုအလွန်ရှင်းလင်းစွာသိရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့် ငါတို့လိမ့်မည်သည့်စွမ်းအင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
호게임 အင်္ဂါနေ့ 25 စက်တင်ဘာလ 2018
သင်အမှန်တကယ်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မာစတာဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ web site ကိုတင်မြန်နှုန်းဖြစ်ပါသည်
ထို့အပြင် contents တွေကို masterwork ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျပွုပါတော့
ကော်ပိုရိတ်ဆုပေးပွဲ တနင်္ဂနွေ 30 စက်တင်ဘာလ 2018
ကျွန်မလိုအပ်မယ့်အဘယ်အရာကို Grat ဆောင်းပါး။
Jav လွှ စနေနေ့,6အောက်တိုဘာလ, 2018
ဒါဟာဖှယျဖြစ်ခဲ့သည်။ ပို့စ်အပေါ် Keep!
မစ္စတာ Abati Sefiu အင်္ဂါနေ့ဒီဇင်ဘာလ 25, 2018
ကိုယ့် 24 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်: 1: 1963, ကြင်နာစွာငါ့အဘို့ငါ့အသက်ကိုဖတ်နေ
ကြှနျတေျာ့အကောင်းဆုံးနှင့် ပတ်သက်. အတူ။
မှတ်ချက် Leave Cancela Commentary
စာရင်း Added န်ဆောင်မှုများ
ငါ့နာမကိုလူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ငါ့မိသားစုမှာပေမယ့်, မှော်အတတ်နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကမရှိသမိုင်းငါ့ကိုခေါ်သော်လည်းတိုင်းမိသားစုထဲမှာတစ်ဦး weirdo :) လည်းမရှိ, သတ္တုတွင်းအတွက်ငါဖြစ်၏သကဲ့သို့ငါ 40 နှစ်ပေါင်းတစ်စုန်းရယ်, Morgana ဖြစ်ပါသည် I.
Aries, သိချင်စိတ်, ဖယောင်းတိုင်
သိချင်စိတ်, ဖယောင်းတိုင်, Virgo
သိချင်စိတ်, လီယို, ဖယောင်းတိုင်
ကင်ဆာ, သိချင်စိတ်, ဖယောင်းတိုင်
သိချင်စိတ်, Gemini, ဖယောင်းတိုင်
သိချင်စိတ်, Taurus, ဖယောင်းတိုင်
Morgana ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 28, 2018
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 27, 2018
အင်္ဂါနေ့ဒီဇင်ဘာလ 12, 2017
စနေနေ့, 25 မတ်လ 2017